खुशीको खबर : विश्वकै पहिलो कोरोना भ्याक्सिन आज आउँदै ! सेयर गरौ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
खुशीको खबर : विश्वकै पहिलो कोरोना भ्याक्सिन आज आउँदै ! सेयर गरौ
Published : 12 August, 2020 8:11 am
विश्वकै पहिलो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आज सम्ममा आउने भएको छ । मस्कोस्थित गामेलेइ सेन्टरले विकास गरेको कोरोना भाइरस भ्याक्सिन १२ अगस्टमा औपचारिक रुपमा दर्ता गरेसँगै सोही भ्याक्सिन नै विश्वकै पहिलो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन हुनेछ ।
उक्त भ्याक्सिन दर्ता भएसँगै पहिलो चरणमा बृद्धबृद्धा र स्वास्थकर्मीलाई लगाइने तयारी गरिएको रुसी संचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
दुनियालाई नै चकित तुल्याउँदै रुसले यो भ्याम्सिन तयार गरेसँगै रुसी सहायक स्वास्थमन्त्री ओलेग ग्रिडनेभले पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी पिडित बृद्धबृद्धा र फ्न्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै यसको प्रयोग गरेर आत्मबल बढाउने काम गरिने बताए ।